Xisbiga Moderaterna oo soo bandhigay qorshe si weyn uga soo horjeeda qaxootiga | Gaaloos.com
Home » Layaab » Xisbiga Moderaterna oo soo bandhigay qorshe si weyn uga soo horjeeda qaxootiga
Xisbiga Moderaterna (M) oo ah xisbiga labaad ee ugu weyn Sweden ayaa isbuucaan kulankooda ay ku yeesheen magaalada Malmö waxay soo jeediyeen qorsheyaal cusub oo si weyn uga soo horjeeda qaxootiga isla markaana lala barbar dhigi karo ama dhaafsan siyaasda SD. Gudoomiyaha xisbiga Anna Kinberg Batra ayaa soo jeediyay in Sweden ay guud ahaan joojiso qaabilaada qaxootia cusub.
Waxay sidoo kale soo jeediyeen in guud ahaan la xiro xuduudaha wadanka isla markaana dhamaan qaxootigii ka soo galay dhinaca Denmark dib loogu celiyo wadankaas. Xisbiga ayaa doorashadii la soo dhaafay si weyn ugu fashilmay, iyadoo dad badan oo ka tirsanaa codbixiyaashooda ay ku biireen xisbiga SD.
Taasi ayaa keentay in ay bilaabeen siyaasado cusub oo ay ku doonayaan in ay dib ugu soo jiitaan dadkii ka tagay, iyaga oo bilaabay in ay koobiyeeyaan siyaasada SD ama xitaa mararka qaar ay soo jeediyaan fikrado dhaafsan kuwa SD.
Guud ahaan siyaasada Sweden ee ku aadan qaxootiga ayaa aad loo adkeeyay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo hada uu socdo tartan ay ku jiraan xisbiyada siyaasada oo lagu tartamayo cida soo bandhigi karta siyaasada ugu adag ee qaxootiga lagu dhabar-jabin karo.
Title: Xisbiga Moderaterna oo soo bandhigay qorshe si weyn uga soo horjeeda qaxootiga